खेलकुद – Kavreonline
Uncategorized अन्तरबार्ता अन्तरास्ट्रिय अर्थ कथा देश धर्म
पाकिस्तानविरुद्धको खेलअघि के भन्छन् भारतीय कप्तान कोहली?
kavreonline	 Jun 14, 2019
काठमाडौं। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप २०१९ मा भारत र न्यूजिल्याण्डबीचको बिहीबार तय खेल वर्षाले अवरुद्ध भएपछि सबैको नजर अब जुन १६ मा हुने भारत र पाकिस्तानबीचको बहुुप्रतिक्षित खेलमा छ। न्यूजिल्याण्डविरुद्धको खेल वर्षाले रद्द भएपछि भारतीय कप्तान…
नेइमारमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने महिला टेलिभिजनमा खुलायो यस्तो अनौठो कुरा ‘नेइमारसँग यौन सम्पर्क…
बीबीसी । नेइमारमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने महिला टेलिभिजन अन्तर्वार्ता मार्फत सार्वजनिक भएकी छन् । नाजिला ट्रिन्डाडी नाम गरेकी ती महिलाले नेइमारमाथि यौन हिंसा तथा बलात्कारको आरोप लगाउँदै साओ पाओलोमा उजुरी दर्ता गरेकी छन् । गएको मे १५ मा…
के नेयमार र एमबाप्पे रियल मड्रिड जाँदैछन् ?
काठमाडौंः नेयमार र केलियन एमबाप्पे दुवै यो समरमा रियल मड्रिडले भित्र्याउन चाहेका खेलाडी हुन् । यद्यपी रियलले दुई मध्ये एकलाई भित्र्याउन सक्छ । विहिबार एमबाप्पेले आफुले धेरै जिम्मेवारी चाहेको र त्यसका लागि पिएसजी छोड्न सक्ने संकेत समेत…
‘रोनाल्डो फुटबलका देउता हुन्’
काठमाडौंः क्रिस्यिानो रोनाल्डोको युभेन्ट्समा डेब्यु सिजन उत्कृष्ट रहेको उनका सुहकर्मी गोर्गिओ चेइलिनीले बताएका छन् । ‘रोनाल्डो फुटबलमा ढेउता हुन् । उनले युभेन्ट्समा उत्कृष्ट डेब्यु गरेका छन् । रोनाल्डोले युभेन्टसमा भएको ग्यापलाई भर्न…
बार्सिलोनाको यो सिजन यसरि टुङियो
बार्सिलोना कोपा डेल रे फुटबलको फाइनलमा भ्यालेन्सियासँग २-१ ले पराजित भएको छ । शनिबार राति भएको खेलमा यस सिजनको लिग विजेता बार्सिलोनाको अर्को घरेलु उपाधि जित्ने सपना पूरा हुन सकेन। हिजोको खेलमा २१ औं मिनेटमा गोल गर्दै भ्यालेन्सियाले…
रियल मड्रिडका तीन खेलाडी भित्र्याउन पिएसजीको प्रस्ताव, बदलामा नेयमार दिन सक्ने !
kavreonline	 May 22, 2019
काठमाडौंः फ्रेन्च च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) रियल मड्रिडका तीन खेलाडीका लागि ठुलो रकमको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । फ्रान्सेली पत्रिका ‘ले पेरिसियन’का अनुसार पिएसजी वेल्स स्ट्राइकर ग्यारेथ बेल, टोनी क्रुस र इस्कोलाई अनुबन्ध गर्न…
आइपिएल खेलेर नेपाल फर्किए लगत्तै नेपाली बलर सन्दीप लामिछानेले किने यति महँगो बाइक , मुल्य सुन्दा नै…
kavreonline	 May 15, 2019
काठमाडौं – नेपाली बलर सन्दीप लामिछानेले नयाँ मोटरसाइकल किनेका छन् । इन्डियन प्रिमियर लिग खेलेर नेपाल फर्किएलगत्तै उनले नयाँ मोटरसाइकल किनेका हुन् ।उनले ट्वीटर मार्फत बाइक किनेको जानकारी दिएका हुन् ।उनले ट्वीटरमा बाइकसहितको फोटो पोस्ट गर्दै…
खुशीको खबर! कतारमा हुने बिश्वकप छनोट खेलमा नेपाल सिधै दोस्रो चरणमा खेल्न पाउने
काठमाडौं। सन् २०२२ मा हुने कतार विश्वकप फुटबलको छनौट खेलमा नेपालले सोझै दोस्रो चरणमा प्रवेश पाउने भएको छ । नेपाली टोली एसिया वरीयतामा ३४औं स्थानमा परेपछि नेपालले विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणमा प्रवेश पाएको हो । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)…
रोनाल्डोले किने यो नयाँ कार, जुन करको मुल्यले एउटा सहर नै किन्न सकिन्छ
युभेन्ट्सका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गत साता विश्वकै सबैभन्दा महँगो गाडी किनेका छन् । रोनाल्डोले विश्वभर एक थान मात्र बनेको बुगाटी ला भोइचर नामक गाडी ९.५ मिलियन पाउण्डमा खरिद गरेका हुन् । फ्रान्सेली कार कम्पनी बुगाटीले आफ्नो…
रोनाल्डोले फ्रान्समा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो होटल खोल्ने, यस्ता हुनेछन् विशेषता
काठमाडौं। पोर्चुगिज फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो नामबाट अर्को सुविधासम्पन्न होटल खोल्ने तयारी गरेका छन् । होटल व्यवसायमा सिआर–७ ब्रान्डले स्थापित उनले फ्रान्सको पेरिसमा नयाँ होटल खोल्न लागेका हुन् । रोनाल्डोले यसअघि विश्वका…